Toeram-piompiana Iray Nefa Iveloman’ny Olona An-tapitrisany
Fiainana ao Amin’ny Betela
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Catalan Cebuano Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Nzema Ourdou Ouzbek Persianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tarasque Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Valencienne Xhosa Zoloa tzeltal
Nasiana milina fanontam-pirinty vaovao tao Wallkill, any Etazonia, tamin’ny 2 Febroary 1973, mba hamoahana ny gazety Ny Tilikambo Fiambenana sy Mifohaza!
Nividy tany hambolena sy hiompiana tany ny Vavolombelon’i Jehovah, folo taona talohan’izay, mba hamatsiana sakafo ho an’ny mpiasa any Brooklyn, New York, any amin’ny foiben’izy ireo. Lasa namokatra karazan-tsakafo hafa koa anefa ilay tany, tatỳ aoriana. Tsy inona izany fa ny sakafo ara-panahy.—Matio 24:45-47.
Toeram-pambolena sy Fiompian’ny Vavolombelon’i Jehovah any Wallkill, any New York, taoriana kelin’ny 1970
I Philip Wilcox no mpiandraikitra an’ilay toerana fanontam-pirinty tamin’izany. Hoy izy momba ny andro voalohany nampiasana an’ireo milina tao Wallkill: “Iray volana teo ho eo no nanangananay an’ireo milina fanontam-pirinty haingam-pandeha. Nanandrana nampiasa azy ireo izahay, ary tsy ela dia afaka namoaka gazety an’arivony vitsivitsy. Nalefanay tany amin’ny fanontam-pirintinay any Brooklyn izy ireny avy eo. Ny tany Brooklyn indray no nandefa azy ireny tany amin’ny fiangonana mba hamenoana ny fanafaran’izy ireo. Tsy tianay hisy ho verivery fotsiny ireo gazety na ny iray aza.”
Tsy naharaka ny fangatahan’ny olona intsony ireo milina fanontam-pirinty, taoriana kelin’ny 1970, na dia niasa isan’andro aza. Nifandimby niasa alina tao amin’ilay milina fanontam-pirinty tao Brooklyn ireo mpiasa mba hanomezana fahafaham-po an’ireo nangataka boky sy gazety. Namboarin’ny Vavolombelon’i Jehovah àry ilay fanontam-pirinty vaovao tany Wallkill mba hanampiana ny fanontam-pirinty tao Brooklyn.
Nisy milina fanontam-pirinty efatra sy toerana iray fandefasana entana ary Efitrano Fanjakana iray tao amin’ilay tranobe voalohany fanontam-pirinty tao Wallkill. Mbola tsy tena niasa tsara akory anefa ireo, dia efa nisy tranobe iray hafa naorina teo akaikin’ilay voalohany. Be loatra ny boky sy gazety ara-baiboly nohafaran’ny olona, ka mbola tsy vita akory ilay tranobe faharoa dia efa natsangana ireo milina fanontam-pirinty enina fanampiny tao anatiny.
Nandroso foana ny teknolojia ary nitombo foana ny boky sy gazety ara-baiboly nohafaran’ny olona. Tsy maintsy nasiana fanavaozana imbetsaka àry tao amin’ilay fanontam-pirinty ao Wallkill, ary nitarina imbetsaka ilay fanontam-pirinty. Nosoloana milina vaovao sy haingam-pandeha ireo milina efa tranainy, taorian’ny 1980.
Tsy nisy pirinty natao intsony tany Brooklyn tamin’ny 2004. Tany Wallkill àry no natao pirinty ny boky nanomboka tamin’izay. Tany amin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Kanada kosa ny gazety no natao pirinty nanomboka tamin’ny 2010. Mahavita manao pirinty gazety 200 000 isan’ora ilay milina fanontam-pirinty vaovao any Kanada.
Ambony: Manomana an’ireo taratasy akambana ho boky, tany Wallkill, tamin’ny 2005. Ambany: Toeram-pambolena sy Fiompian’ny Vavolombelon’i Jehovah, any Wallkill, any New York, 2013
Arifomba be izao ny toerana fanontam-pirinty any Wallkill, ary olona 280 eo ho eo no miasa any. Boky sy Baiboly 17 tapitrisa mahery no natao pirinty tany, tamin’ny herintaona. Misy toerana 12 hafa fanaovan’ny Vavolombelon’i Jehovah pirinty koa any Afrika, Amerika Atsimo, Aostralia, Azia, ary Eoropa, ankoatra an’ilay any Wallkill sy Kanada ary Meksika. Natao hanomezana an’izay ilain’ireo olona mahatsapa hoe mila an’Andriamanitra izy ireny.—Matio 5:3.
Feno 50 Taona Sahady ny Toeram-pambolen’ny Vavolombelon’i Jehovah